at 3:39 PM Labels: Do It Yourself, ရိုးရာအစားအစာ
ချစ်သော မောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့တော့ မောင်နှမတွေကို လက်ဖက်သုပ်လေး လုပ်ကျွေး ပါမယ်နော်။ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မောင်နှမတွေက လက်ဖက်ကို အမြဲတမ်းရဖို့ ခဲယဉ်းတတ်ပါတယ်။ မမလုက တော့ တို့အမြဲတမ်းမရနိုင်တဲ့ လက်ဖက်နဲ့ နှိပ်စက်လေခြင်းလို့ အပြစ်မပြောရလေအောင် လက်ဖက်လုပ် နည်းလေးကိုလည်း မျှဝေပေးဦးမှာနော်။
လက်ဖက်ခြောက် (ဂရင်းတီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်) လက်တစ် ဆုပ်ကို ယူပြီး ဇလုံတစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူ လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးခွဲကို လောင်း ထည့်ပြီး စိမ်လိုက်ရင် ပွတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ ပြီးတဲ့အခါကျရင် အဲ့ဒီ ပွလာတဲ့လက်ဖက်ဇလုံကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ နာရီဝက်လောက် ပေါင်းလိုက်ပါနော်။ နာရီဝက်ကြာရင် အောက်က အပူပေးတာကို ရပ်လိုက် ပြီးတော့ အဖုံးမဖွင့်သေးဘဲ အအေးခံထားလိုက်ပါနော်။ အေးပြီဆိုတော့မှ အိုးအဖုံးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး လက်ဖက် ထဲက အရည်ကို နည်းနည်းညှစ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါနော်။ ပြီးရင် ရိုးရိုးလက်ဖက်နှပ်သလိုပဲ ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ အချိုမှုန့်၊ပုစွန်ခြောက်တို့နဲ့ပြန်နှပ်လိုက်ပေါ့နော်။ ချဉ်ငံစပ်ပဲနှပ်နှပ်၊ ရိုးရိုးအဆိမ့်ပဲနှပ်နှပ်၊ နှပ်ချင်သလိုသာ နှပ်ပေတော့နော်။
အခုပြထားတဲ့ လက်ဖက်သုပ်လေးကတော့ 18 x2မွေးနေ့ပွဲတုန်းက ဧည့်ခံခဲ့တာ အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲနော်။ ဒါကတော့ အကြော်စုံ (နှစ်ပြန်ကြော်)ကို မကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေ၊ ပဲမကြိုက်တဲ့သူတွေ၊ သွားမှာ အပေါက် တွေပါလို့ အကြော်ဆိုရင် ၀ါးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ မောင်နှမတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်နော်။
ကျွန်မက လက်ဖက်ဆိုရင် နှစ်ပြန်ကြော်နဲ့ စားရတာကို သိပ်မကြိုက်လို့ ဒီနည်းလေးနဲ့ လက်ဖက်သုပ် စားကြည့်ရင်း ကောင်းတယ်လို့ အိမ်သားတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ပြောလို့ မောင်နှမတွေကို မျှဝေလိုက်ရတာပါရှင်။
လက်ဖက်နှပ်တော့မယ်ဆိုရင် လက်ဖက်ညွန့်လေးတွေကို ဇလုံတစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး ရေနွေးပွက်ပွက် ဆူလောင်းထည့်ထားပြီး အဖုံးအုပ်ထားပြီး အနည်းဆုံး ၁၅မိနစ်ကနေ နာရီဝက်လောက်ထိ ထားလို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီအရည်တွေ သွန်ပစ်ပြီး လက်ဖက်ထဲက အရည်တွေကို ညှစ်ပစ်ပါ။ ပြီးတော့မှ လက်ဖက်ကို ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပုစွန်ခြောက် မညက်တညက်လေးထောင်း၊ ဟင်းချိုမှုန့်တို့နဲ့ နာနာနယ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ နှမ်းဆီလေးဆမ်းပြီး ခပ်ကြာကြာလေး စိမ်ပေးထားပါနော်။ ဒါကတော့ အဆိမ့်နှပ် ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ လူကြီးတွေအကြိုက်များကြတယ်လေ။
လုံမပျိုတွေအကြိုက်ကတော့ ချဉ်ငံစပ်ရှယ်ပေါ့လေးပေါ့။ အဲ့ဒါကျတော့ လက်ဖက်နှပ် တဲ့အခါ ခုနကလိုပဲ အညွန့်လေးတွေကို ရေနွေးနဲ့စိမ်၊ အရည်တွေညှစ်ထုပ်ပြီး တော့မှ ငံပြာရည်အနည်းငယ်၊ ဆား၊ ဟင်းချိုမှုန့်၊ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပုစွန်ခြောက်လေးကို မညက်တညက်လေးထောင်း၊ ရှောက်ရည်/သံပရာရည်၊ ငရုပ်သီးစိမ်း မညက်တညက်ထောင်းလေး တို့နဲ့နယ်ပေး၊ ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးရယ်၊ နံနံပင်လေးရယ် တို့ကို ပါးပါးလှီးပြီး ထည့်နယ်ပါနော်။ ပြီးတော့မှ နှမ်းဆီလေး ဆမ်းပြီး စိမ်ပေးထား။ စားခါနီး ၁ နာရီလောက် အလိုမှာ နှပ်ရင် ရပြီနော်။ အဲ့ဒီလက်ဖက်လေးကိုတော့ တစ်ဇွန်းလောက်စားလိုက်ရင် လျှာကို လည်ထွက်သွားမှာနော်။
မြေပဲဆန်ကို ပြုတ်တဲ့အခါ မြေပဲဆန်အခြောက်ကို သန့်စင်အောင် ရေဆေးပြီး တော့ မြေပဲဆန်မြုပ်အောင် ရေထည့်ပြီး rice cooker နဲ့ပဲ ပြုတ်ပေးပါ။ ပထမတစ်ရည် ကုန်သွားတဲ့ အခါကျရင် ပဲတွေကို အပေါ်အောက်လေး နှံ့အောင် မွှေပြီးတော့ ဆားလေးနည်းနည်းထည့်၊ ပြီးရင်နောက် တစ်ခါ ပဲမြုပ်အောင် ရေထည့်ပြီး ထပ်ပြုတ်ပေးပါနော်။ ပဲက လတ်ဆတ်တယ်၊ ဓာတုဆေးတွေလည်း မသုံးထားဘူးဆိုရင် နှစ်ရည်ခမ်းတာနဲ့ နူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေခမ်းလို့ ခလုပ်တက်သွားတာနဲ့ အဖုံးကို မဖွင့်ဘဲ အငွေ့လုံအောင် ဒီအတိုင်းထားပြီး အေးတော့မှပဲ ဖွင့်ပါနော်။ တချို့မြေပဲဆန် တွေက ပိုးထိုးမှာ စိုးလို့ လှောင်လက် သမားတွေက ဆေးသုံးထားရင် တော်ရုံနဲ့ မနူးတတ်ပါဘူး။ ပဲက ဆတ်တောက်ကြီး ဖြစ်နေတတ်တာမို့ သတိထားပါနော်။
ပြလို့ပြောင်းဖူးကိုလည်း နူးနေအောင်ပြုတ်ပြီး အအေးခံပြီး ချွေပေး ထားပါနော်။
တညင်းသီး အစေးသီးကိုလည်း ပြုတ်တဲ့အခါ ပထမတစ်ကြိမ် ပွက်ပွက်ဆူလာပြီးရင် ရေတွေကို သွန်ပစ်လိုက်ပါနော်။ နောက် တစ်ကြိမ် ရေထပ်ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ အဲ့ဒီအတိုင်း ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြုတ်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူတဲ့အခါ ရေတွေ သွန်ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် တညင်းသီးကို အခွံနွှာပြီး အလယ်မှာရှိတဲ့ အညှာလေး ကို ဖဲ့ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ တညင်းသီးတွေကို အိုးထဲထည့်၊ ရေမြုပ် အောင်ထည့်၊ ဆားလေးနည်းနည်း၊ ထန်းညက်ခဲလေး ၃ လုံးလောက် ပစ်ထည့်၊ ဆီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီး rice cooker နဲ့ ပြုတ်လိုက်ပါနော်။ ရေခမ်းသွားလို့ ခလုပ်တက်သွားရင် ထုံးစံအတိုင်း မဖွင့်လိုက်ဘဲ အအေးခံထားလိုက်ပြီး အေးတော့မှ ပါးပါးလှီးထားလိုက်ပါနော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လေး ပြင်စားကြတာပေါ့နော်။ ပြလို့ ပြောင်းဖူးပြုတ်၊ မြေပဲပြုတ်၊ တညင်းသီးပြုတ် တို့ ရှိသလို ကြက်သွန်ကြော်နှမ်းကြော်လေးနဲ့ သီဟိုဠ်ဆန်ကြော်တို့လည်း ရှိတာမို့ မောင်နှမတွေ စိတ်ကြိုက် သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်နော်။
တညင်းသီးပြုတ်နဲ့ ပြလို့ပြောင်းဖူးပြုတ် အစေ့လေးတွေချည်း မြင်နေတယ်..... စားချင်ထှာ....
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ September 3, 2010 at 4:00 PM
Sandakuu September 3, 2010 at 4:17 PM
subuueains September 3, 2010 at 5:41 PM
G talk ကနေ mee.pho.saung@gmail.com ကို invite လုပ်ထားတယ်နော်။
ဟုတ်တယ်၊ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နေတာ ၅ခါလောက်ရှိပြီ။ အဆင်ကိုမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ မမိုးကောင်းသူဘလော.ဂ်ထဲမှာရေးဖူးတာ၊ “အချဉ်တည်ရင် လက်ပူ၊လက်အေး”ရှိတယ်၊ “လက်ပူ”နဲ.နယ်ရင် အချဉ်က ပုတ်သွားတတ်တယ်လို.ဖတ်ဖူးလို. လက်အိတ်နဲ. နယ်တာလဲမရပါဘူး။
ငံတဲ.အရသာဘဲရနေတယ်။ပုဇွန်ကတော.ကျက်တယ်၊ပထမတခေါက်ကတော. အမျိုးသားကအရမ်းစားချင်နေလို.၊ပြီးတော.သူကအငန်လဲကြိုက်တော. ပုဇွန်ကိုမသုတ်ဘဲကြော်ပေးလိုက်တယ်။
ကြော်လိုက်တော. တော.အရသာကသိပ်မဆိုးပါဘူး။ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ.နံနံပင်လဲအုပ်လိုက်တော. အနံ.ကောင်းသွားတယ်။
မလုလုနဲ.ပြောဖြစ်ကြရင် ရန်ကုန်လိပ်စာပြောပြနော်။ ရန်ကုန်လာရင် လာလည်မလို.။
မြူးမြူး September 4, 2010 at 7:42 AM
ချဉ်စပ်လေးက စားချင်စရာပဲ.. သီဟိုစေ့ကြော်တော့ မထည့်တော့ဘူး.. စားရင်ခေါင်းမူးတတ်လို့.. ပြောင်းဖူးလေးနဲ့ မြေပဲပြုတ်လေးနဲ့ သုပ်စားရမယ်.. သွားရည်တောင်ကျလာပြီနော်..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 4, 2010 at 3:18 PM
ဟုတ်တယ် လဘက်ကို ပြောင်းဖူးလေးနဲ့ သုပ်စားတာ သိပ်ကြိုက်တာဘဲ
ပဲတွေမထည့်တော့ဘဲ ပြောင်းဖူးနဲ့ဘဲ ပိုကြိုက်တယ် ပဲထည့်ရင် မာတယ်လေ.. ပြောင်းဖူးနဲ့ကျ အိအိလေးမို့ ပိုကြိုက်တယ်
ဒီနည်းက နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ လဘက်ဝေးနေသူတွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်မှာဘဲ
SHWE ZIN U September 6, 2010 at 11:32 AM
ဟင်းကြွေး တွေ အကုန်ဆပ်သွားတယ် ငါးဖယ်လုံးကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ဂဏန်း လက်မကြော်ချက် နဲ့ ဘလက်သုတ်လေးဝါးပြီး ပြေးပြီဗျာ ထမင်းဝိုင်းကို
ရက်စက်လိုက်တာ မယ်လုရေ ဒါကတော့ တကယ့် အရှိုက်ထိတာပါ့။ ဂျီးတော် တရားနဲ့ ဖြေပါမယ်ကွယ်။
su myat myat nyein November 23, 2010 at 3:19 PM